အမေရိကန်များ နှစ်၂၀ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်သို့ စင်ကာပူစက်မှုဇုံသွားဖွင့်ခြင်းမှ၊ မြန်မာအတွေ့ကြုံများ
ဗီယက်နမ်သို့အလုပ်သွားလုပ်ခြင်း နှင့် ဆောင်းပါးများ ကောက်နုတ်ချက်
ဗီယက်နမ်စစ် (၁၉၅၅-၁၉၇၅) အနှစ်၂၀ ကြာအောင် အမေရိကန်တို့ အင်အားကြီးမားစွာ၊ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ရကြီးစိုးမှုကို တွန်းလှန်ပါဝင်စွတ်ဖက်ခဲ့သော်လည်း၊ အမေရိကန်စစ်သည် ၆သောင်းကျော် သေဆုံးပြီး၊ ၃သိန်းကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန်တို့ ခြေကုန် လက်ပမ်း ကျပြီး အောင်မြင်စွာနဲ့ ဆုက်ခွာလာခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ၁၈နှစ်ခန့် ကြာပြီဖြစ်သော ဗီယက်နမ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ စက်မှုဇုံသွားဖွင့်ပါသည်။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ ၈လကြာ စက်ရုံတည်ဆောက်မှု ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရင်း မိုးမခ၊ မြန်မာစင်ကာပူ အင်တာနက်များမှာ ဆောင်းပါးအချို့ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ စာမြည်းအဖြစ် တင်ပြပါသည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်မစီးတတ်လျှင် မဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Only In Vietnam ဓါတ်ပုံများဖြင့် စတင်ပါမည်။ ယခုဓါတ်ပုံများကို သင်မြင်သောအခါ ရယ်စရာဖြစ်နေပေမည် (သို့မဟုတ်) သြော်..ဟု တမ်းတပြီး
Posted by Witmone at 12:36 AM0comments
တိုက်ခန်းတစ်ခု ၃သိန်း၊ ဟိုင်းလတ်ကားတစ်စီး ၃သိန်း၊ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံး ၃သိန်း၊ ဒန်ပေါက်တစ်ပွဲ ၅ကျပ်
တိုက်ခန်းတစ်ခု ၃၀၀သိန်း၊ ဟိုင်းလက်တစ်စီး ၃၀၀သိန်း၊ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံး ၂၅သိန်း၊ ဒန်ပေါက်တစ်ပွဲ ၈၀၀ကျပ်
စင်ကာပူတစ်ဒေါ်လာ ၆၂၀ကျပ် .. ဟိုက်၊ကျလှချည်လား...
တိုက်ခန်းတစ်ခု ၅၀၀သိန်း၊ ဟိုင်းလက်တစ်စီး ၂၀၀သိန်း၊ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံး ၅သိန်း၊ ဒန်ပေါက်တစ်ပွဲ ၁၂၀၀ကျပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP ppp ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် ၁၉၉၉ခုနှစ် 14 billion သာရှိခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရတနာဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းပြီးစီးကာ စတင် ရောင်းချသည်မှစပြီး တဟုန်ထိုးတက်လာသည်။ ၂၀၁၀တွင် 77 billion ရောက်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု Foreign Direct Investment FDI 2011 တွင် 20 billions ရရှိပြီး၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထက် များမည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းသောအလားအလာများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရသစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်လဲလိုသူများ Reformists နှင့် လက်ရှိအရေးပါနေရာသောစီးပွားလုပ်ကွက်များတွင် ရှိနေသည့် လူဟောင်းများ (မီဒီယာများတွင် ခရိုနီဟု ခေါ်ခံရသူများ) ရှိနေပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဦးဆောင်ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတိုက်အခံပါတီများလည်း အပြုသဘောလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရန်အတွက် မီဒိယာကို ဖွင့်ပေးလာခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အခွန်ကောက်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ရင်း၊ ယခု ၂နှစ်အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေသည် အလွန်ခိုင်မာလာသည်ကို အံ့သြဘွယ်တွေ့ရသည်။ ၂နှစ်အတွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာသည် ကျပ်ငွေ ၉၀၀အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသောကြောင့်၊ အခက်အခဲများစွာ တွေ့လာရသည်။ စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ရင်းနှီးသူ ဒေါက်တာဦးမြင့်ကို ခန့်ထားရာမှ၊ အကြံပေးမှုများကို မီဒီယာများတွင် တွေ့ရပါသည်။ အစိုးရသစ်က မည်သို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုရရှိရေးအတွက် ဆွဲဆောင်မှုများစွာရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြားမှ အထူးစီးပွားရေးကုမဏ္ဍီများသာ လာရောက်ကြသည်။ ဥပမာ.. ဓါတ်ငွေ့ ၊ ရေနံ၊ ရေအားလျှပ်စစ်၊ ကျောက်စိမ်း၊ သစ်၊ အထည်ချုပ်၊ စသည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
Year US$1=Kyat S$1=Kyat မြန်မာနိုင်ငံ၊အထင်ကရဖြစ်ရပ်များ US1=S$
1952 4.76 14.22 အိန္နိယငွေကြေးမှခွဲထွက် 3.03
1962 4.76 14.22 ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအာဏာသိမ်း 3.03
1972 8 22 started black market rate 2.81
1982 20 42 အစိုးရပေါက်ဈေး 1US$=5kyats 2.13
1988 27 55 ရှစ်လေးလုံး၊ စစ်အာဏာသိမ်း 2.01
1990 30 50 ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊တပ်ချုပ်ဖြစ် 1.81
1995 113 80 1.41
1997 178 120 မြန်မာဘဏ်များပြသနာဖြစ် 1.48
1998 334 200 ASEAN စီးပွားကပ်ဆိုက် 1.67
2000 344 200့ မြန်မာပြည်၊နိုင်ငံခြားနှင့်အဆက်ဖြက် 1.72
2001 448 250 1.79
2002 591 330 1.79
2003 1044 600 ဒိပဲယင်းအရေးခင်း 1.74
2004 879 520 ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၊တာဝန်ရပ်နား 1.69
2005 913 550 1.66
2006 1264 800 1.58
2007 1350 900 စက်တင်ဘာ၊သံယာအရေးခင်း 1.5
2008 1269 900 မေ၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း 1.41
2009 1233 850 အမေရိကန်လွှတ်အမတ် Jim Webb လာ 1.45
2010 945 700 ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲကြံ့ဖွံ့ နိုင် 1.35
2011 750 620 လွှတ်တော်ခေါ်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန် 1.21
၂၀၁၁ လွှတ်တော်တွင် အစိုးရငွေဈေးမှာ US$1.00= Kyat 6.50 ဖြစ်နေခြင်းကို နှုန်းသစ်သတ်မှတ်ရန်ဆွေးနွေးနေကြပါသည်။ ကျွန်တော် ပြည်ပတွင်နှစ်ပေါင်း၂၀ အလုပ်သွားလုပ်ရသောကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး ရှိတာအကုန်ထုတ်ရောင်းရခြင်းကိုပဲ စိတ်ပျက်ပြီး၊ မြန်မာ့စိးပွားရေးကိုလည်း လုံးဝနားမလည်ပါ။ ယခုအစိုးရသစ်အနေနှင့် ကျပ်ငွေတန်ဖိုးမြင့်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းအတွက် စိတ်အားတက်မိပါသည်။
ကမ္ဘာစီးပွားရေးကို ကြည့်ပါက၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်စီးပွားရေးကပ်ကဲ့သို့ ထပ်မံဖြစ်လာမည့် အရိပ်ယောင်ပြနေပါသည်။ စီးပွားရေးမကောင်းလျှင့် အိမ်ယာဈေးများ တက်လာလေ့ရှိသည်။ မြန်မာပြည်တွင်လည်း အိမ်ယာဈေးများတက်နေပါသည်။ စီးပွားရေးကျဆင်းမည့်ပုံရှိသည့် နိုင်ငံများတွင်လည်း အိမ်ယာဈေးများတက်လာပြန်ပါသည်။ ယခု စင်ကာပူတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကြသော မြန်မာများအဖို့ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်သည်။ အလုပ်ပါမစ်များ ဆက်မတိုးပေးခြင်း၊ အသစ်ချမပေးခြင်း၊ အိမ်ဈေးများကြီးလာခြင်းအပြင် မြန်မာပြည်ငွေပို့လျှင့် ဒေါ်လာပိုကုန်ကျလာသောကြောင့် နိုင်ငံခြားလုပ်ရသည်မှာ မကိုက်တော့ဘူး ဖြစ်လာကြပါသည်။
မြန်မာအစိုးရအဖို့ အရှေ့တောင်အားရှနိုင်ငံများတွင် စင်ကာပူကိုမှီရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွင် စင်ကာပူသည် နော်ဝေး၊ ကာတာ စသည့်နိုင်ငံငယ်များနှင့် ယှဉ်ပြီး ထိတ်တန်းတွင်ရှိနေပါသည်။ စင်ကာပူသည် ငယ်သော်လည်း၊ GDP တွင် အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်ပင် ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကြီးများထက် ၂ဆမျှသာလွန်သေးသည်။ GDP မြင့်များလာပါက ထိုနိုင်ငံငွေကြေးကို ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုရသည်။ နိုင်ငံချမ်းသာလာခြင်းဟု ပြောနိုင်ပါသည်။
GDP ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်လာသောအခါ၊ အစိုးရက အခွန်များများရပါသည်။ အစိုးရအခွန်ကောက်ရငွေသည် GDP ၏ ၁၀ရာနှုန်းခန့် ရရှိပြီး၊ ထိုငွေဖြင့် စစ်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်း၊တံတား၊ လူနေအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းများကို လုပ်ရသည်။ စင်ကာပူတွင် လူများဝင်ငွေမှ ၃၀% ခန့်ကို CPF ဟုခေါ်သော စနစ်ဖြင့် မစုမနေရ၊ စုဆောင်းခိုင်းထားသည်။ ထိုငွေဖြင့် နိုင်ငံ၊ခေါင်းဆောာင်၊ စီးပွားပညာရှင်များက ပြန်လည်ရင်းနှီးရင် တိုင်းပြည်ပိုမိုချမ်းသာလာပါသည်။
အောက်ပါဇယားအရ၊ မြန်မာနိုင်ငံ GDP တဟုန်ထိုးတက်လာသည်။ ဗီယက်နမ်ကို ကျော်ပြီးလျှင် စင်ကာပူ၊ မလေးရှားကို မှီရန် ပြည်ပရောက်၊ မြန်မာများ၊ ပြည်တော်ပြန်လာမှဖြစ်ပါမည်။ အခုပြန်လို့မရပါ။ အလုပ်မရှိ၊ စီးပွားရပ်ချိန်ခဏစောင့်ရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံစုဆောင်းငွေ Foreign Reserve Money များလာရမည်။ Foreign Direct Investment FDI များစွာရှိရမည်။ အခွန်ရှောင်ပြေးသူ (Corruption) နည်းရမည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလုပ်အကိုင်များရှိလာပြီး ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ငွေလဲနှုန်းသမိုင်းကို လေ့လာပါက၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ ဂျာမဏီ၊ ဆွဒ်ဇာလန် နိုင်ငံများမှာ ငွေကြေးအလွန်ခိုင်မာသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ http://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်လည်း အခြားငွေကြေးများနှင့်ယှဉ်ပါက တော်တော်ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။ စီးပွားအင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ကျပ်ငွေ ခိုင်မာခြင်းဖြင့်၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာများထံမှ ၀င်ငွေခွန်ကောက်စရာမလိုတော့ပါ။ သူတို့မျာနိုင်ငံခြားငွေရှာပေးသူများဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ၁၀% မှ ၂% သို့ ခေတ္တလျှော့ကောက်နေပါသည်။ ကောင်းပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ပြည်ပလုပ်ကိုင်သူများကို ၀င်ငွေခွန်မကောက်ကြပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတက်လာခြင်းကို ကြိုဆိုရပါသည်။
ကမ္ဘာချမ်းသာသောနိုင်ငံများ၏ GDP. တရုပ်သည် ဂျပန်ကိုကျော်ပြီး ဒုတိယစူပါနိုင်ငံဖြစ်လာ၏။
US$, Sin$, and Burmese Kyat's History
(Direct translation of Zaw Aung’s Article from Moemakha Site.)
List of significant events in Burma (From the Table above).
1952 - Separated from Indian Monetary System.
1962 - General Ne Win’s Coup.
1972 - Started black market rate.
1982 - Official rate is5KyatsaUS Dollar.
1988 - Military Coup after failed 8-8-88 Uprising.
1990 - General Than Shwe became Commander-in-Chief.
1997 - Banking crisis in Burma.
1998 - ASEAN Economic Crisis.
2000 - Economic Sanctions Began.
2003 - De-pa-yin Murders of ASSK’s followers.
2004 - Prime Minister General Khin Nyunt was removed.
2007 - Monks’ Protest in September.
2008 - Nargis Cyclone in May in Irrawaddy Delta.
2009 - American Senator Jim Vebb’s Visit to Burma.
2010 - Large Scale Privatization. USDP won General Election.
2011 - New Union Parliament. U Thein Sein elected as the President.
အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတန် ငွေစက္ကူ
စင်ကာပူမှာ ဒူဘိုင်းငွေစက္ကူ ဒေါ်လာတသိန်းတန် 100,000 dirham ကို ကိုင်ပြပြီး၊ ငွေလဲဖို့ ကြံရွယ်နေတဲ့ မြန်မာတယောက်အကြောင်းပါ။ ဟိုး .. ဒူဘိုင်း ဟိုတယ်ကြီးမှာ ၄နှစ်အလုပ်လုပ်စဉ် သူဌေးကြီးတယောက်ရဲ့ ကျန်ခဲ့တာ ရယူထားတယ်ပြောပါတယ်။ စင်ကာပူဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော် တန်ဆိုပဲ။
စင်ကာပူမှာ ငွေလဲလို့ရမလား သင့်ကို လာမေးရင်၊ ဝေးဝေးက ရှောင်ကြပါ။
၁။ ဒူဘိုင်းမှာ တသိန်းတန်ငွေစက္ကူ မရှိပါဘူး။ အများဆုံးက တသောင်းတန်ထိ ရှိပါတယ်။
၂။ စင်ကာပူမှာ တန်ဘိုးအများဆုံး ဒေါ်လာတသောင်းတန်ငွေစက္ကူရှိပါတယ်။
၃။ အမေရိကန်မှာတော့ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတန်ရှိပါတယ်။ ၁၉၃၄ခုနှစ်မှာ တကြိမ်တည်း ထုတ်ဖူးပါတယ်။ အပြင်မှာသုံးလို့မရပါဘူး။ အစိုးရဌာန ငွေပေး၊ငွေယူ လုပ်ငန်းများမှာပဲ သုံးပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က ဟ၊ ပွတာပဲဆိုပြီး သူ့နဲ့အတူ၊ ငွေသွားလဲရင်၊ ၂ယောက်စလုံး ရဲဖမ်းခံထိ၊ ကွိသွားမယ်ဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဈေးချိုချိုနဲ့ ရောင်းတာကို ပွတာပဲဆိုပြီး ၀ယ်ထားလိုက်ရင် .. မိတ်ဆွေရဲ့ လောဘအကျိုးခံရပါမယ်။ သတိထားပါ။
- ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများကို အခွန်ကောက်ခြင်း Jan2012 မှစတင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အနှစ်၂၀ကျော် တလဒေါ်လာ၁၅၀၊ ၁၂၀ စသဖြင့် အခွန်ဆောင်ခဲ့သူ စာရေးသူ (Blog owner) နှင့် စင်ကာပူနှင့် ပြည်ပရာက်မြန်မာမိတ်ဆွေများ၊ (ပတ်စပို့ သက်တမ်းတိုးရန်ဖြစ်စေ၊ အခြား မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ) အခွန် မှန်မှန် ပေးဆောင်ခဲ့သူ မြန်မာများအတွက် အောက်မေ့ဘွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီ ဂျပန်အကူညီဖြင့် Myanmar Stock Exchange ကို စတင်တော့မည်ဟု အစိုးရသစ်က ကြေညာခဲ့ပါသည်။
Reference: (Hla Oo's Blog)
Posted by Witmone at 2:56 PM0comments
Labels: ဗဟုသုတ, ပြည်တော်ပြန်
ခမောက်ဆောင်းထားတဲ့ ဗီယက်နမ်မိန်းကလေး၊ ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးပါးကွက် မြန်မာမိန်းကလေး .. ဒီ၂ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ မြို့ပေါ်မှာ တမင်ဖန်တီးရိုက်ယူထားတာ မဟုတ်မှန်း ထင်ရှားပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသကို ကင်မရာမင်း ကိုယ်တိုင် သွားပြီး ရိုက်ယူတာကြောင့် သဘာဝကျပါတယ်။ လှပပါတယ်။
ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ (ဆိုင်ဂုံ) အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ မနေ့က အီးမေးမှာ Happy Planet လူမျိုးအဖြစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကို တက်လာပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ၁၈နှစ်အကြာမှာ တင်းတိန်ရောင့်ရဲသော နိုင်ငံအဖြစ် နောင်အမေရိကနိုင်ငံများနဲ့အတူ ပျော်ပျော်နေထိုင်သော နိုင်ငံအဖြစ်ကို တိုးကတ်လာပါတယ်။
ငွေကြေးအားဖြင့်တော့ ဆင်းရဲပါတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ တလကို လစာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကနေ အများဆုံး ဒေါ်လာ၅၀၀လောက်ပဲ ရပါတယ်။ ဘွဲ့ရကျောင်းသားတယောက် လစာ ဒေါ်လာ ၂၀၀လောက်
Posted by Witmone at 2:56 PM4comments
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများရဲ့ အစွဲလမ်းဆုံးကတော့ အစားအသောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်များ ပေါများ၊ ဈေးချိုပြီး အမေရိကန်များ အားလပ်ချိန်အပမ်းဖြေခြင်းဟာ အစားအသောက် ထွက်စားခြင်းပါပဲ။ တပတ်တခါ၊ နှစ်ခါ အပြင် စားသောက်ဆိုင်ထွက် မစားနိုင်ရင် အမေရိကားမှာ နေရကျိုးမနပ်သလိုပါပဲ။
အစားအသောက်ပေါများလွန်းတာကို ဗာရာဏသီပြည်ကြီးကဲ့သို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ခန္ဓာန်ပြည်ကြီးလို ကြွယ်ဝပေါများလှပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးကလည်း အကျယ်ကြီးဆိုတော့ ရာသီဥတုမျိုးစုံရှိပြီး၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ဘယ်ဒေသက သစ်သီးဝလံ၊ပန်းပင်များ အမေရိကန်ပြည်နယ်များမှာ ရှင်သန်၊ဖွံ့ဖြိုး၊ အသီးသီးနိုင်ပါတယ်။ အသီးအနှံ စိုက်ပျိုးရေးကိုတော့ ကာလီဖိုးနီးယားနဲ့ဖလောရီဒါပြည်နယ်များမှာ အင်မတန်ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ သားငါး၊ နွား၊ ဆိတ် မွေးမြူ၊ စည်သွတ်ခြင်းများကိုတော့ တက်ကဆက်နဲ့ အမေရိကားအလယ်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာ အကြီးအကျယ် လုပ်ငန်းကြီးများရှိပါတယ်။ ဘီယာ၊ ၀ိုင်များကိုလည်း စပျစ်သီးခင်းများစွာကတဆင့် အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်များကို ၁၀လီတာ ပုလင်းကြီးများနဲ့ ရောင်းတဲ့အခါ၊ မင်နရယ်ဝါးတား ရေသန့်ဗူးထက်တောင် ဈေးချိုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
စားသောက်ဖို့အတွက် မြန်မာအများစုဟာ အိမ်မှာပဲ ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပါတယ်။
Posted by Witmone at 8:02 AM0comments
ကျွန်တော် Singapore Technology CSM မှာအလုပ်လုပ်စဉ်က လစာ တနှစ် ဒေါ်လာ ၁၀သန်းခန့်ရတဲ့ CEO Barry Waite (US Citizen, Scottish)၊ ၃လပတ် အစည်းအဝေးတခုတွင် ကုမဏီတခုလုံးကို ပြောခဲ့ခြင်းအား အမြဲအမှတ်ရနေပါသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် ကုန်ကြမ်း၊ စက်ပစ္စည်၊ လူသား နှင့် နည်းစနစ် ပေါင်းစပ်သည့် Process တခုမှ ကုန်ချောဖြစ်သော Fabricated Silicon Wafer ထွက်လာရသည်။ သူက လူနားလည်းသော ထမင်းချက် Hotel Cook နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
သူတို့ကို ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် Raw Material ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ အတူတူ၊ Cooking Tools ချက်ပြုတ်သည့်ပစ္စည်းကရိယာများလည်း အတူတူ၊ ချက်သည့်၊ Time & Location အချိန်နေရာလည်း အတူတူ၊ Recipe ချက်ပြုတ်သည့် နည်းစနစ် လည်းအတူတူ ပေးပြီး ချက်ပြုတ်ခိုင်းသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီး တယောက်နှင့်တယောက် မတူသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာရရှိသည်။ အားလုံးအတူတူဖြစ်ပါရက် ဘာကြောင့် သူတို့ချက်ပြုတ်သော စားသောက်ဖွယ်ရာ များအဘယ်ကြောင့် ညံ့သည်၊ ကောင်းသည် ဖြစ်နေရပါသနည်း။
အဖြေမှာ .. ချက်ပြုတ်သော စားဖိုမှုးမတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စားဖိုမှုး၏ Attitude ကောင်းပါက၊ သူချက်ပြုတ်သော စားသောက်ဖွယ်ရာများမှာ စားကောင်းမည်ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by Witmone at 7:40 PM0comments
အမေရိကန်များ နှစ်၂၀ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်သို့ စင...
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများရဲ့ အစွဲလမ်းဆုံးကတော့ အစား...
ATTITUDE: အမေရိကန်လူမျိုး CEO လာလုပ်သော စင်ကာပူ CS...